बिष्णु बरालले श्रीमानसंग टिकटक बनाएको भिडियो बाहिरियो, बिष्णु र प्रदिपको प्रेम टिकटकमा मात्र सिमित थियो त ? फुपूलाई पक्राउ नगर्नुको कारण के हो ? (भिडियो) – Kavrepati
Home / समाचार / बिष्णु बरालले श्रीमानसंग टिकटक बनाएको भिडियो बाहिरियो, बिष्णु र प्रदिपको प्रेम टिकटकमा मात्र सिमित थियो त ? फुपूलाई पक्राउ नगर्नुको कारण के हो ? (भिडियो)
admin June 24, 2021	समाचार Leaveacomment 108 Views
काठमाण्डौ- माइती पक्षले सामाजिक सञ्जाल र युट्युवहरुमा घटनाको छानविन हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । माइतीले विवाहमा दाइजो कम भएको गुनासो विष्णुको श्रीमान र उनका परिवारले गरेको बताएकी छन् । माइती पक्षले दिएको सुन कम भएको भन्दै गुनासो गरेको विष्णुको आमाले भिडियोमा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
Previous अस्ताए नेपालकै चर्चित डाक्टर, जुन रोगको बिशेषज्ञ थिए त्यही रोगले लग्यो यी चर्चित डाक्टरलाई , स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो क्ष्यति
Next छातीमा गोलि थाप्न तयार छौ तर काठमाडौंबासीलाई मेलम्चीको खानेपानि दिदैनौ, हेलम्बुबासीको यस्तो चे तावनी (भिडियो)